कन्फ्यूजमा हुनुहुन्छ ? घर किन्ने कि भाडामा बस्ने ? - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- महेन्द्र लम्साल / प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन २९, २०७६
अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय एउटा नोटिसेबल होम बाएर कम्युनिटिमा पर्छ । किन कि हाम्रो समुदाय द्रुतगतिमा बढ्दो छ । हाम्रो संस्कार र संस्कृतिका कारणले पनि सकेसम्म आफु बस्ने घर किन्ने काम प्राय जसो सबैको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
अष्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा आइ घर किन्नको लागि आर्थिक र बैधानिक रुपमा क्वालिफाइ हुनु भनेको हाम्रा लागी एउटा गर्वको बिषय नै हुन्छ । कतिपय मानिसहरु जब अष्ट्रेलियामा पीआर आउछ तब घर किन्ने दाउमा रहन्छन । तर थुप्रै मानिसहरु पीआर आएपछि ब्यबसाय गर्ने, करियरको लागि कुनै डिग्री हासिल गर्ने वा घर किन्ने भन्ने अनिर्णय मै रुमल्लिएका पनि भेटिन्छन ।
अष्ट्रेलियामा पीआर हुनु पछाडी मानिसहरुको थुप्रै संघर्ष जोडिएको हुन्छ । मतलब पीआर हुनका लागि मापदण्डहरु पुरा गर्दा धेरै समय, श्रोत तथा परिश्रम खर्च भैसकेको हुन्छ । मतलब दुःख गरि प्राप्त हुने स्थाई बसोबास को सुबिधामा अरु थप मूल्य र महत्व थपिएको हुन्छ ।
घर किन्ने कि भाडामा बस्ने ?
कतिपय सम्भावित ग्राहकहरु घर किन्नु भनेको आफुलाई ऋणमा राख्नु हो, मोर्टगेज स्ट्रेश निम्त्याउनु हो भन्ने पनि गर्दछन । तर समग्रमा त्यो सधै सहि होइन । आफ्नो बोरोइङ क्षमता हेरेर बस्नका लागि एउटा घर किन्नुलाइ समय सापेक्ष र भबिष्य प्रति जिम्मेवार निर्णयनै मान्नु पर्दछ । यसले दिर्घकालिनमा तपाइलाई फाइदा नै हुन्छ । बरु निरन्तर भाडामा बस्दा तपाईलाइ भबिष्यमा पश्चाताप हुन सक्छ किनकि भाडा मा तिरेको पैसा नफर्कने गरि एकोहोरो जाने मात्र हुन्छ ।
अस्ट्रेलियनहरुको आम्दानीको सबभन्दा ठुलो हिस्सा घर भाडामा जान्छ । यसलाई घटाउन सकिन्छ तर टार्न सकिदैन । घर भाडा तिरेको पैसा आफ्नो घरको किस्ताको रुपमा तिर्न पाउने हो भने केहि हदसम्म चित्त बुझाउन सकिन्छ र आफुले आफैलाइ भबिष्यप्रति जिम्मेवार बनेको महसुस हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि आज तपाईले आफ्नो आम्दानीले किस्ता तिर्न सक्नेगरि केहि डिपोजिट र बाकि बैंक ऋणमा घर किन्नु भयो । अहिलेको मार्केट हेर्दा सिड्नीकै पश्चिम, उत्तर पश्चिम र दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा सामान्यतया ६ लाखको हाराहारीमा ३/४ बेडरुम सहितको घर किन्न सक्नु हुनेछ ।
६ लाख मूल्यको घरमा ५ प्रतिशत डिपोजिट (३० हजार ) कटाएर हेर्दा ५ लाख ७० हजार लोन हुन आउछ । सामान्यतया २ जनाको फुलटाईम जागिरको आम्दानीले पहिलो घर किन्नकालागि माथि उल्लेख गरिएको लोन सर्भिसेबल हुन्छ । त्यसका साथै बैंक लोनमा घर किन्दै गर्दा खर्च र बचतका दृष्टिकोणले तपाई थप जिम्मेवार पनि बन्नु हुनेछ ।
आउनोस्, घरभाडा र मोर्टगेजको बीचमा हेरौ !
अहिलेको प्रचलित बैंक ब्याजदर करिब ३ प्रतिशतको हाराहारी मै छ | मानौ ३ प्रतिशतका दरले ५ लाख ७० हजारको बार्षिक ब्याज करिब १७१०० डलर हुन्छ । त्यो भनेको प्रति हप्ता करिब ३३० डलर हुन जान्छ | तर त्यहि प्रोपर्टी तपाईले भाडामा लिन चाहनु भयो भने प्रति हप्ता ४५० डलर भन्दा कममा पाउनुहुन्न । यसरि हिसाब गर्दा यदि घर किनेको खण्डमा करिब १२० डलर (४५० – ३३०) प्रति हप्ता आफ्नै घरमा बसेर बचत गरेको देखिन्छ । त्यसमा पानि, काउन्सिल र घरको बिमा रकम भने छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
माथिको हिसाबलाइ अब हामि दिर्घकालिन फाइदाको रुपमा हेरौ । आज तपाईले ६ लाखमा घर किन्नुभो, अहिलेसम्मको प्रोपर्टी मार्केट ट्रेन्ड हर्दा करिब १० बर्षमा तपाईको घरको मूल्य कम्तिमा पनि ९ लाख हुने अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ | त्यति बेला तपाईको मोर्टगेज ४ लाखको हाराहारीमा झरेको हुन सक्छ । ब्याजदर यस्तै रह्यो भने तपाइको किस्तामा ब्याज करिब २५० डलर प्रति हप्ता हुनसक्छ । तर अर्को तिर आउदो १० बर्षमा त्यहि घरको भाडा वृद्धि भै करिब ६०० डलर प्रति हप्ता हुनसक्छ ।
त्यति बेला तपाईसंग करिब ५ लाख (तत्कालिन तपाइको प्रोपर्टीको मूल्य – मौज्दात मोर्टगेज) डलर बराबरको इक्विटी र वीक्ली रिपेयमेंटमा करिब ३५० प्रति हप्ता ( ६००–२५०) फाइदा हुन सक्छ । यहि क्रम निरन्तर अगाडी बढ्दै गयो भने तपाई रिटायर्ड हुदासम्म वा हुनु अगावै बैंक लोन सकिने र राम्रो इक्विटीका कारण तपाइको post retired lifestyle तनावमुक्त हुनुका साथै आर्थिक हिसाबले आत्मविश्वास बढ्न सक्छ ।
घरको मूल्य बढ्दै हो ! किन्दा ठिक होला कि पर्खिदा ?
२०२० जनवरीको अन्त्यमा Corelogic द्वारा प्रकाशित प्रोपर्टी मार्केट ढाचालाइ अध्यन गर्दा २०२० जनवरी र फरबरीको मध्ये सम्ममा घरको मूल्य २०१७ को जनवरी पछि सबै भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ | त्यसै गरि अक्सन क्लीयरेन्स रेट पनि ८२ % पुग्नुले अस्ट्रेलियाको प्रोपर्टी मूल्य अब बढ्ने बलियो संकेत देखिन्छ । बिशेष गरि ब्याजदर कम हुनुको कारण मार्केटमा स्टकको कमि तर माग बढी भएको कारणले पनि प्रोपर्टीको मूल्य द्रुत गतिमा बढेको देखिन्छ ।
यो केवल सुरुवात हो । बढ्ने क्रम करिब २ बर्षसम्म चल्न सक्छ र एउटा आदर्शतम बिन्दुमा पुगीसके पछि स्थिर र केहि कम हुने पनि गर्दछ । कोरोनाभाइरस महामारीको सन्त्रासले प्रोपर्टी मार्केटमा हलचल ल्याउने संकेत देखिएको छ । तैपनि राम्रो बचत र सुरक्षित रोजगारी भएकाहरुका लागि पहिलो घर किन्ने यो राम्रो अवसर पनि बन्न पनि सक्छ ।
अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारीको स्थिति, बैदेशिक व्यापार तथा सम्भावित कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी असरले आगामी दिनमा अष्ट्रेलियाको प्रोपर्टी मार्केट प्रभावित हुने देखिन्छ तैपनि भाडा निरन्तर तिरी रहनु भन्दा आफ्नो आर्थिक क्षमताले धान्ने गरि समयमै घर किनी किस्ता तिर्नुमा आर्थिक र पारिवारिक रुपमा भबिष्यप्रति जिम्मेवार कदम मानिन्छ ।
परामर्शका लागि : Mahendra.Lamsal@raywhite.com
*माथिको लेख बैधानिक सल्लाह होइन , लेखकको व्यक्तिगत विचार मात्र हो !